Yenza kusebenze ngokuchofoza kwesokudla ku-HP Mini 210 Touchpad | Kusuka kuLinux
Kulezi zinsuku umsebenzisi womsebenzi wami ufake Kubuntu in yakhe I-HP Mini 210 nayo yonke into isebenze kahle ngaphandle kokuthi ngezinkinobho zephedi yokuthinta bengingenakho ukuchofoza kwesokudla, kuphela ukusebenza kokuchofoza kwesobunxele.
Iphuzu ukuthi lolu hlobo lwe Ama-Netbooks Ayinazo izinkinobho ezimbili ezihlukaniswe ngokomzimba njengakwamanye amamodeli (isibonelo i-HP Mini 110), nanoma iyiphi indawo oyicindezele, ngaso sonke isikhathi maqondana nezenzo zokuchofoza kwesobunxele.
I-Synaptics ayikwazanga ukulungisa lokhu nokusesha i-inthanethi ngithole isisombululo. Sivula ukuphela bese sibeka:
Siqala kabusha futhi silungile.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Okokufundisa / okwenziwa ngesandla / Izeluleko » Yenza kusebenze ngokuchofoza kwesokudla ku-HP Mini 210 Touchpad
Nginemodeli efanayo ye-netbook, bengingazi ukuthi ngingafaka ukubuntu, bengicabanga ukuthi kuzoba nzima kakhulu, njengamanje ngisebenzisa i-lubuntu. Into enhle ukuthi anginayo leyo nkinga ngephedi yokuthinta.
Uma kunokwenzeka, ngifakile i-KDE encwadini yami yokubhalela engu-210 nge-debian ... ayindizi kepha inokusebenza okuhle 😀
Yebo, bengiyifakile kwi-HP Mini 110 futhi yenziwe kahle, ibinokusebenza okungcono kune-Xfce ezimweni eziningi.
Umfowethu une-netbook yalowo modeli futhi kuze kube manje unayo ne-Windows XP yezinhlelo zakhe ze-elekthronikhi. Ngiyethemba ukuthi ngingakuqinisekisa ukuthi uthuthele kwaDebian, ngoba ngizamile ukufuna izinhlelo ze-Linux electronics futhi kuze kube manje, angikakutholi.
Mtshele ukuthi asebenzise ini, iyi-simulator enhle kakhulu yesifunda, iyasiza kwizifundo zamasekethe 1, 2 no-3, i-electronics 1, 2 no-3, njll.
Engxenyeni yokubala, ungasebenzisa i-python ngemitapo yolwazi, ukufaka i-matlab kuyo yonke into, nakubalawuli bama-microcontroller, ukwenza i-odigo nokuhlanganisa ku-pic nakwezinye izakhiwo.
x ku-fpga ungenza ikhodi bese ulingisa i-vhdl ne-veriloj.
Kuyindaba yokujwayela ukusebenzisa amathuluzi ahlukene nokuthi eyunivesithi akukuvimbeli.
salu2 kusuka eCOLOMBIA
awuzange uzame ngisho?
Eminyakeni emibili edlule ngafaka i-kubuntu kwi-PC yami, iPentium 4, kwathatha impilo yonke ukulayisha ideskithophu futhi negundane lalihamba kancane, ngalo lolo suku ngafaka i-lubuntu. Njengoba ngine-Atom N450 kwi-netbook yami angizange ngiyizame, mhlawumbe kule minyaka ukushelela sekuthuthukile, ngizozama ukuyifaka nge-debian ne-kde. Ngizokutshela ukuthi isebenza kanjani 🙂
Ubuntu kanye nokuphuma kwayo kunezakhi ezenza kube nzima. Ngakho-ke, ngisebenzisa iDebian futhi isebenza izimanga (nokuthi ngibeka i-GNOME 3 kuyo).
Qala kabusha? Kungani uqala kabusha? Uyayisebenzisa iWindows!?
[ikhodi] # insmod psmouse proto = exps [/ ikhodi]
Yala ukwazi izinsuku kuze kuphele unyaka